Samsung kwuputara 5x Optical Zoom Ultra Slim Camera Module | Gam akporosis
Samsung Electro-Mechanics malitere ọrụ ya na ahịa modulu igwefoto na 2003 ma kemgbe ahụ ngalaba ahụ na-emepe modulu igwefoto maka igwefoto Optical Stabilization Systems (OIS).
Na ohere ọhụụ a, ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala na ọ mepụtara a ebughibu, ultra-ebughibu igwefoto modul ike nke 5x ngwa anya mbugharị. Akụrụngwa ahụ adịla njikere izute anyị, dịka mmepụta igwe ga-amalite n'ọnwa a.
Ebe OPPO bidoro Reno na 10X ngwa anya mbugharị ikike, ọrụ ahụ yiri ka ọ na-enweta ala ... Huawei tinyere ihe mmetụta igwefoto nwere ikike mbugharị anya nke 5x na P30 Pro Ma ewezuga eziokwu a ọ bụ ihe nkịtị iji nweta mbugharị anya 2x nwere oghere telephoto dị ka achọtakarị n'ọtụtụ ekwentị, mana ịbawanye mbugharị na 5x chọrọ ntakịrị injinia, ihe na-agaghị abụrịrị ihe ịma aka Samsung.
Samsung Ultra Slim 5x Optical Zoom Camera Module
Agbanyeghị, anyị ga-agbakwunye nke ahụ Samsung nwetara Corephotonics n'oge na-adịbeghị anya, otu ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na Oppo na anya anya mbugharị anya. Nke a nwere ike bụrụ na o kere òkè na etu ngwa teknụzụ si abanye ngwa ngwa.
N'ikwu okwu banyere atụmatụ ahụ, modul ahụ dị naanị 5 mm, na-enye ya slimmer ewu karịa ọtụtụ elekere mbugharị 2x na ahịa taa. Teknụzụ dị iche na Oppo ma ọ bụ Huawei. Ọ ka gụnyere iji periscope imewe nke nwere ọtụtụ enyo ndị a na-eji na-egosipụta ìhè site n'akụkụ iji mee ka ihe dị gịrịgịrị.
Samsung nwere ike ire modulu igwefoto na OEM ndị ọzọ n'ọdịnihu dị nso., ma ị nwere ike ịchọrọ iji ya mbụ na ụdị gị. Ya mere, na 10 Galaxy Note ma ọ bụ ihe ọ bụla nke etiti usoro Galaxy nwere ike ịmalite site na 5x optical zoom periscope lens. Nke a ka ga-ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-ekwuwa ọkwa 5x optical zoom ultra-slim module